Ujeedo; Warqad Furan, Cabasho la xirriirta marinhabaabintii dhisimaha guddiga xuquuqul Insaanka ee Soomaliya – Radio Daljir
Janaayo 3, 2018 7:09 b 0
Dawladda Soomaaliyeed waxay isku dayeysey muddo dheer, tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii
sokeeye, in la dhiso guddiga xuquuqul insaanka ee Soomaaliya (GXIS).
Guddiga Xuquuqul Insaanku waa guddi madaxbannan oo lagu jideeyey si dastuuri ah oo uu ansixiyey
Hindise sharciyeedka xeerka lagu abuurayey Guuddiga xuquuqul insaanka, waxaa soo jeediyey
wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka (WHHXI) waxaana ansixiyey
baarlamaanka ka dib markii daraasad fiican uu ku sameeyey islamarkaasna uu aqbalay in la hergeliyo
Juun 6, 2016kii.
Bishii August isla sanadkaasi, Maxadweynihii xilligaas ee Somalia Mudane Xasan Sheikh Moxamud
ayaa saxiixay xeerkii si uu u noqdo xeerka rasmiga ee lagu dhisi karo dhismaha guddiga xuquuqul
Insaanka; wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaankana waxaa lagu waajibeyey in ay hirgeliso ama
dhaqangeliso xeerkaas. Bishii Juulaay 9keedi 2017kii, Marwo Deeqa Yaasiin oo ah wasiirka WHHXI
ayaa ku dhawaaqday in la dhisay guddiga farsamo ee loo yaqaan guddiga xulashada ee dhisidda
xubnaha guddiga xuquuqul insaanka (Technical Selection Panel (TSP)), uuna guddigaasu mas’uul ka
yahay soo dhisidda xubnaha guddiga qaran ee xuquuqul Insaanka soomaaliya. (guddigu wuxuu ka
koobnaa 19 oo laga soo magacaabey dawlad goboladyeeda dhammaan, Somaliland iyo gobolka
Banaadir). Wasiirka wasaaradda haweenka waxay ballan qaadey in hawsha guddiga ee xulidda ay
noqon doonto mid qof walba oo dalbadey laga qeybgeliyo, loo siman yahay, hawshiisu caddahay,
lana aamini karo ama la isku halleyn karo; sidoo kale wasaaraddu waxay ballan qaadey in hawsha
lagu dhisayo guddiga xuquuqul insaanku ay noqon doonto mid waafaqsan xeerka u degsan dhisidda
guddiga xuquuqul insaanka (Somaaliya).
Intaa ka dib, maxaa dhacay?
1. Waxaa la magacaabey 19 xubnood oo lagu soo magacaabay qaacidada 4.5 ee awood qabsiga
Soomaalida, si loo qanciyo aragtida guud ee waxqeybsiga.
2. Waa la baahiyey in la soo diro karo araajida dadweynuhu ay ku codsanayaan ka mid
noqoshada guddiga la dhisi doono ee xuquuqul Insaanka iyadoo loo tartami doono,
muddada codsiguna uu xaddidan yahay lana caddeeyey.
3. Waxaa araajida soo buuxiyey in ku dhow ama ka badan 640 tartame markii la xiray arji
4. 74 tartame ayaa laga laga xushay 640 ku dhowaad ee tartameysey iyadoo la qiimeyey
shahaadooyinkoodi, khiradahoodi, iyo akhbaarta laga helay dadka iyaga raadraacoodii ahaa
sida tartamayaasha arjigoodi ku qoreen.
5. Dabadeedna, 74 kii ayaa u fadhiistey imtixaan qoraal ah si loo soo saaro liis kooban oo ay ku
qoran yihiin dadka imtixaanka ku guuleystey oo dhamaa 45 xubnood oo tartantay.
6. 45tii xubnood ee guuleysetay (sida la sheegay) ayaa mar kale imtixaan afka ah laga qaadey,
waxaa la shaaciyey in imtixaankaasi ku guuleysteen 27 qof oo tartamayaal ah.
7. Guddiga xulashada iyo wasaaradda Haweenka waxay ka doorteen 27kii xubnood 9 xubnood,
kuwaas oo lagu soo doortay rabitaanka wasiiradda wasaaradda haweenka iyo rabitaanka
guddiga xulashada iyo sidoo kale kan madaxdii soo magacaawdey guddiga xulidda oo ah
madaxda dawlad goboleedyada iyada oo darbiga laga tuurey natiijooyinkii ka dhashay
imtixaannnadii kala duwanaa la soo maray oo lagu tacab beelay iyo tartamayaashii xaqa u
lahaa in ay tartankaa si xaq ah ugu soo baxaan. (Allaw adaa caadil ah oo xaq darra oo dhan
Dhibaatooyinkii bareerka ahaa ee hareeyey geedi socodkii xulista:
1. Tartamayaasha qaarkood ayaa loo ogolaadey in ay u fadhiistaan imtixaanka qoraalka iyaga
oo aan soo buuxin shuruudihii laga rabay si ay u soo galaan imtixaanka qoraalka.
2. Tartame jooga London UK ayaa loo ogolaaday in imtixaanka tartanka uu galo iyadoo
tartamayaashii kale ee la midka ahaa loo diiday in sidaas oo kale loo yeelo laguna khasbay in
ay Muqdisho ku soo galaan mudo afar cisho ah.
3. Tartamayaasha qaarkood oo ku dhacay imtixaankii qoraalka ay si sharci darro ah loogu
ogolaaday inay galaan imtixaanka wareysiga ah weliba lagu soo saaro liiska 9ka qof ee la
sheegay in la soo xulay kuwaas oo lagu sababeeyey in qabiiladooda aysan ku jirin guddiyada
qaran ee kale, talaabadaas oo mugdi galisay aqoontii la dalbaday iyo imtixaanadii la galay.
4. Tartamayaasha qaarkood waxay ahaayeen shaqaale dawladeed oo weliba madax ah oo aan
xaq u laheyn in ay ka qeyb galaan tartanka guddiga waayo waxaa diidayay Xeerka lagu dhisi
karo guddiga xuquuqul insaanka ee Soomaaliya (Waxayna ka mid noqdeen sagaalka la
sheegay in la soo xulay ee qeylada ka taagan tahay).
5. Guddiga xulashada ee la soo dhisey ma noqon mid hawshiisa u guta si xor ah; faragelin
badan ayaa lagu sameeyey oo ka timid xaga madaxwenayaasha dawlad
goboleedyada maadaama ay saameyn ku lahaayeen xubnahaas oo ay soo magacaabeen laba
laba ka mid aha guddigaas, iyagoo faragelintaa siyaabo kala duwan u sameeyey si ay u soo
saaraan dad aan lagu xulin aqoon, waayaaragnimo, karti iwm.
6. Tartamayaashii aqoonta iyo waayoargnimada lahaa waa la tuuray badankooda sababo qabiil
ama iyadoo la adeegsanayo 4.5 qaldan ka dib markii dhammaantood ay soo mareen
talaabooyinkii la mari lahaa ee waajibey, ayna noqdeen dadka ugu dhibco badnaa balse la
xaqirey laguna xadgudbey xuquuqdooda iyo aqoontoodiba.
7. 4.5 laguma tartatamo ee waxaa lagu tartamaa shahaadooyinka, khibradaha ama waayo
aragnimada, kartida iyo dadnimada, iyo akhlaaqda.
Sharciga Islaamka wuxuu qabaa dadku in ay siman yihiin; ninkii camalkiisu ama kasabkiisu uu
hormarin waayo kuma hormari karo nasabkiisa ama qabiilkiisa.
8. Qaar ka mid ah goob-joogayaashii ka tirsanaa bulshada rayadka way ka xanaaqeen ama ka
tegeen wajibaadkii loo igmaday sababtuna waxay aheyd wasaaradda haweenka iyo
xuquuqul insaanka iyo guddiga xulashada oo is hortaagay in la duubo imtixaanka afka ah si
loo helo raadraac iyo keyd lagu kala xaqsoori karo dadka imtixaanka galay si looga hortago in
najiijada imtixaanka afka la musuqmaasuqo sida hawshu u dhacday hadda.
9. Saxidda imtixaanka afka ama qiimeyntiisa waxaa loo dhigay laba qeybood oo qeybna waxaa
dhibco ku qiimeynayey guddiga xulidda ee u xilsaaran hawshaas qiimeynta; qeybna waxaa la
siiyey u kurgaleyaasha qaramada midoobay. Qaybta dambe waa tan qiimeyneysa aqoonta
iyo waayo aragnimada tartameyaasha, hase yeeshee wasaarada ma oggola qiimeyntaas
hufan kana madaxabanaan musuqmaasuq iyo qabyaalada,
10. Sababhaas iyo kuwa kaleba, liisk la soo saaray ee guddiga xuquuqul insaanka ma ahan mid
lagu dhisey si waafaqsan xeerk dawladda Soomaaliyeed ee lagu dhisi karo guddiga xuquuqul
insaanka iyo midka caalamiga Paris ee loo yaqaan (Paris Principles) mabaadi’dii Paris ee
dawladaha adduunkku isku raaceen.
Waxaan ugu yeeraynaa ama dalbanaynaa qodobbada soo socda:
1. Waxaan dalbaneena in Cadaalad iyo Sinnaan loo celiyo hawsha lagu dhisiyey GXIS si qof
walba xaqiisa u helo.
2. Waxaan ka dalbaneenaa Ra’iisalwasaaraha Soomaaliya in uu soo farageliyo hawshan
qaranka ee muhiimka ah si uu u saxo khaladaadka iyo xadgudubyada ay sameeyeen guddiga
xulidda, wasaarada Haweenka iyo xuquuqul insaanka, iyo weliba madaxda dawlad
golobleedyayada ee faragelinta ba’an ku sameeyey hawsha guddiga xulidda inta aan loo
gudbin fadhiga golaha wasiirada maadaama hawl sharci darro iyo xadgubyo badan ay ka
buuxaan sida kor ku xusan.
3. Waxaan dalbeennaa in laga hortago falalka xun oo ay caadeysteen madaxda qaarkood oo ku
dhisan nin jecleysi, eex, afaara qabiil, laaluush iyo musuqmaasuq.
4. Waxaan ka dalbeenna masuuliinta beesha caalamka ee wakiiladooda Soomaaliya joogaan in
ay arrinkan foosha xun ka hortagaan oo waajibkooda caalimiga ah ka gutaan.
5. Waxaan weydiisaneynaa warbaahinta Soomalida ee dalka iyo dibeddaba, in cabashooyinka
kor ku xusan ay baaraan si madax bannaan, daraasad iyo xog uruurin badan ay ku
sameeyaan, si ay ugu soo bandhigaan xaqiiqda jirta iyo xaqa dadka la dhulmiyey si ay ugu
soo bandhigaan umadda soomaaliyeed iyo caalamkaba.
6. Waxaan ugu baaqeenna dhammaan in la ixtiraamo xeerarka suuban dalka iyo kuwa